एन्फा अध्यक्षमा नेम्वाङ निर्वाचित, नयाँ कार्यसमितिमा को-को ? - चारदिशा
एन्फा अध्यक्षमा नेम्वाङ निर्वाचित, नयाँ कार्यसमितिमा को-को ?
June 21, 2022 चारदिशा देश
काठमाडौं : अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)को २१ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गर्न सोमबार भएको निर्वाचनले १९ जनाको मात्रै टुङ्गो लगाएको छ ।
१३ खुल्ला सदस्य पदका लागि भएको निर्वाचनले ११ जना मात्रै चयन गरेको छ । नेम्वाङ प्यानलबाट ६ तथा शेर्पा प्यानलबाट ५ सदस्य विजयी भएका छन् । चार जना सदस्यका उम्मेदवारको समान ३९–३९ मत भएपछि दुई सदस्यको टुङ्गो लागेको छैन । एन्फाको विधानअनुसार आजै पुन: निर्वाचन गर्न सम्भव नहुने भएपछि बाँकी दुई सदस्यको विशेष साधारण सभा आह्वान गरेर टुङ्गो लगाउनु पर्ने भएको छ ।
२१औं चुनावी साधारण सभाले चयन गरेको १९ सदस्यीय कार्यसमिति:
सदस्य: रविन्द्र चन्द (४६), अनिल मल्ल (४७), भोजराज शाही (४४), पुरुषोत्तम थापा (४३), महेन्द्र क्षेत्री (४४), विजय नारायण श्रेष्ठ (४४), रमेश व्यञ्जनकार (४३), भरत बुढ थापा (४०), टिकाराम लामा (४१), मणिराज विष्ट (४२), मनिष जोशी (४८) ।
दशौं लाख टन खाद्यान्न रोक्ने रुसी कदमलाई ईयूले दियो ‘युद्ध अपराध’को संज्ञा
योगले जीवन शान्त, फलदायी र उत्पादनमूलक बनाउँछ : गृहमन्त्री खाँण